အခမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းစာများ - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 04/05/2022 19:41 | သတင်းအချက်အလက်
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် သတင်းစာအများအပြားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုများတွင် ပါဝင်လာကြသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကို ဘေးဖယ်ထားဖို့တောင် ဝေးဝေးသွားခဲ့တယ်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခြင်းသည် သတင်း၏ မူရင်းနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အကျိုးဆက်များ မဖြစ်စေပါ။
အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုသည် အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာမီဒီယာမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ကိရိယာအားလုံးကို အသုံးပြု၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တူညီသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာ၊ အပ်ဒိတ်သတင်းများနှင့် အသစ်များပါရှိသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ခုနစ်ရက်နှင့် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ။
စပိန်တွင်, ဗဟုသုတရရှိရန် သင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာများစွာရှိပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ သတင်းစာ သေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ စာဖတ်သူများကို ထူးထူးခြားခြား တီထွင်ဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ စာဖတ်သူများအား အသိပေးခြင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။
1 ရေးထားသောစာနယ်ဇင်း vs ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်း
2 အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာများ သိထားသင့်သည်။
2.2 မိနစ် 20
2.3 အယ်လ် Mundo
2.4 အယ်လ် Economista
2.10 BBC သတင်း – ကမ္ဘာ
2.11 အေဂျင်စီ ၁၃
ရေးထားသောစာနယ်ဇင်း vs ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်း
အခု နှစ်တွေ ၊ ရေးထားသော စာနယ်ဇင်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အပြောင်းအလဲများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး သတင်းစာများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းကို ရွေးချယ်လာကြသည်။ ပုံနှိပ်အစား။ ဤပြောင်းလဲမှုများ၏ တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မှာ ပုံနှိပ်သတင်းစာများတွင် ရောင်းအားကျဆင်းလာကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖော်မတ်သို့ လမ်းကြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အထင်ရှားဆုံး ခြားနားချက်တစ်ခု ရေးထားသော နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗားရှင်း အကြား ဆက်သွယ်ရေး ဆိုသည်မှာ၊ အခမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းစာတွေ အများကြီးရှိတယ်။. ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်းအားလုံးသည် သီးသန့်သတင်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် အခကြေးငွေပေးချေခြင်းများရှိသောကြောင့်၊
ကြားခံဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံး၏ နောက်ထပ်ခြားနားချက်မှာ အပ်ဒိတ်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်းကို အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်နေပြီး ပုံနှိပ်ဗားရှင်းကို ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီပြီးနောက် အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထုတ်ဝေသည့် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်ပတ်သက်၍၊ သတင်းစာစက္ကူသည် အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အလွယ်တကူ ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။. အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထောက်ပြစရာ စတုတ္ထ ခြားနားချက်မှာ သတင်းစာ စာကြည့်တိုက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာပညာအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါ်တယ်များတွင်၊ သင်သည် သော့ချက်စာလုံးများ သို့မဟုတ် လင့်ခ်များကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဟိုးရှေးရှေးက ပြုလုပ်ခဲ့သော စာစောင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြေရှိသည်။. အရေးပါသော အဖြစ်အပျက်များကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းမရှိပါက ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို စာဖြင့်ရေးသားထားသော စာနယ်ဇင်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် မာလ်တီမီဒီယာအရင်းအမြစ်များကို မီးမောင်းထိုးပြလိုပါသည်။ ပုံနှိပ်သတင်းစာများတွင် အဖြစ်အပျက်များ၏ ပုံများကိုသာ တွေ့နိုင်သည်။ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်းများ၊ အော်ဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ရုပ်ပုံများ စသည်တို့၏ ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါတယ် အခြားခြားနားချက်မှာ အလတ်စားနှင့် စာဖတ်သူကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။. တစ်ဖက်တွင်၊ သမားရိုးကျ စာနယ်ဇင်းများတွင် တစ်ဖက်သတ် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လွင်သော ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွင် စာဖတ်သူများအား မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးထားသည်။
ဒီအပိုင်းမှာ အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာအချို့ကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည့်စာရင်းတစ်ခု သင့်အား ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုအရေးကြီးတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနယ်ဇင်းကို အသုံးမပြုသေးပါက၊ ဤအွန်လိုင်းမီဒီယာနှင့် သင့်ကိုယ်သင် စတင်ရင်းနှီးရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် အင်တာနက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဤမီဒီယာအမျိုးအစားကို ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် တင်းကျပ်သော သတင်းစာများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖတ်အများဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းကို စပိန်မြို့တော်တွင် 1976 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်အကြာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းပေါ်လာသည်။
ကျွန်တော်ပြောမယ့် သတင်းစာတော်တော်များများမှာလိုပဲ၊ ပုံနှိပ်ဗားရှင်းမှာ မိနစ် 20 ကို တနင်္လာကနေ သောကြာနေ့အထိပဲ ထုတ်ဝေပါတယ်။ ငါတို့အကြောင်းပြောရင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ဝေမှု၊ သင့် wall တွင် အပ်ဒိတ်သတင်းများကို အမြဲတွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းကို စပိန်တွင် အကောင်းဆုံး အခမဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းစာများထဲမှ တစ်ခုဟု သတ်မှတ်သည်။. ၎င်းသည် 2005 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည် စာဖတ်သူအများအပြားကို ရရှိခဲ့ပြီး Instagram ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ရက်များတွင် ၎င်း၏တက်ကြွစွာတည်ရှိနေခဲ့သည်။
စပိန်သတင်းစာ El Mundo၊ အသုံးပြုသူ ကိုးသန်းကျော်ရှိသည့် ၎င်း၏အွန်လိုင်းဗားရှင်းတွင် ဒုတိယဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဝဘ်ပေါ်တယ်တွင် သတင်းများကို တိုင်ပင်ရုံသာမက Instagram လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရှိ သင့်ပရိုဖိုင်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုသည် ၎င်း၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုမှစတင်၍ 1995 ခုနှစ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်း၏စာဖတ်သူများအား အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာအသစ်များကို ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာများ၏ နောက်တစ်ခုသည် စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအတွက် အထူးပြုသော အွန်လိုင်းသတင်းစာအဖြစ် 2006 ခုနှစ်တွင် တင်ပြခဲ့သည်။ El Economista သည် ကဏ္ဍရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ရည်ညွှန်းကြားခံတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် အားကစား သတင်း အချက်အလက် သတင်းစာများထဲမှ တစ်ခု. ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိတဲ့ မီဒီယာတော်တော်များများက စာဖတ်သူ အရေအတွက် ကျော်လွန်လာပါပြီ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါ်တယ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပေါ်လာသည်။ စပိန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံး အားကစားဝဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။. ၎င်း၏ အားကစားဆိုင်ရာ ထုတ်ဝေမှုများတွင် မည်သည့် အားကစားပုံစံကိုမဆို အကျုံးဝင်သည့် အကြောင်းအရာများအပြင် အားကစားလောကမှ နာမည်ကြီး အားကစား ကိန်းဂဏန်းများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စပိန်တွင် လူသုံးအများဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ 10 တွင်ရှိသော အခြားသတင်းစာများအကြောင်းကို ပြောနေပါသည်။ ယခင်ကိစ္စ၊ The As သတင်းစာသည် အားကစားလောကနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းရေးသားခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။
သီးသန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် အလွန်အောင်မြင်သော သတင်းစာ။ နာမည်ကြီးသတင်းထောက် Pedro J. Ramírez ၏လက်မှ ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် 2015 ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်. ဤဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာကို မည်သို့မွေးဖွားလာပုံ ဇာတ်လမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိသင့်သိထိုက်ပြီး ၎င်းသည် လူစုလူဝေး ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုမှ မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မခံချင်စိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသော ဤကြားခံ၏ ဖန်တီးသူများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏လိုဂိုသည် ခြင်္သေ့ဖြစ်သည်။
သမိုင်းကြောင်း 22 နှစ်ကျော်ရှိစပိန်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းပေါ်တယ်. OJD၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဆိုင်ရာရုံး၏အဆိုအရ တစ်နေ့လျှင် အထူးခြားဆုံးလည်ပတ်မှုအများဆုံး အင်တာနက်မီဒီယာ 40 တွင်တည်ရှိသည်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထင်မြင်ချက် သတင်းစာလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။. ၎င်းတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာသတင်းများရေးသားရန် ရည်မှန်းထားပြီး နေ့စဉ် ကော်လံ ၁၂ စောင် ထုတ်ဝေနေသည့် အလုပ်သမား တစ်ရာနီးပါးရှိသည်။ နံနက်စောစောပိုင်းမှ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးချိန်အထိ သတင်းမွမ်းမံမှုများ အမြဲမပြတ်ရှိနေပါသည်။
စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ သတင်းများကို အထူးပြုသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့။ ၎င်းသည် လူလတ်ပိုင်းပရိသတ်များအတွက် ရည်ရွယ်သည့် စပိန်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာဖြစ်သည်။ ဒီသတင်းစာကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ​​ကျော်က ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အမှန်တရားကို သိနိုင်ဖို့ လူထုရဲ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်, သတင်းစာပညာကို လေ့ကျင့်ရာတွင် အခြေခံမဏ္ဍိုင်လေးခုရှိသည်။သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါ။ မည်သည့်အယူဝါဒ သို့မဟုတ် စီးပွားရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးအုပ်စုကိုမဆို။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ မိမိတို့၏ အလုပ်ကို တာဝန်ကျေစွာ ထမ်းဆောင်ပါ။သူတို့လုပ်တဲ့အရာမှာ ထူးချွန်မှုကို အမြဲရှာတယ်။
လိုက်နာရမယ့် တတိယမဏ္ဍိုင်ကတော့ အလုပ်သမားတွေပါ။ အောင်မြင်မှုသည် အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း နားလည်ပါ။ဆက်ဆံရေး၊ လေးစားမှုနှင့် ကောင်းသောလေထုကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်း၏တန်ဖိုးများနှင့် အခြေခံမူများထဲမှ တစ်ခုကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းသည် လက်ရှိကာလအတွက် အဓိကဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့်လည်း အနာဂတ်အတွက်။
BBC သတင်း – ကမ္ဘာ
၎င်းသည် United Kingdom အခြေစိုက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စပိန်ဘာသာဖြင့် အဖတ်အများဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါ်တယ်ဖြစ်သည်။. ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင်၊ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်သာမက အစီရင်ခံစာများ၊ သဘောထားဆောင်းပါးများ၊ သက်သေခံချက်များ စသည်တို့ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
ဂျာနယ်လစ်ဇင်ကျောင်းသား သုံးဦးဖြင့် တည်ထောင်ထားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် သတင်းများနှင့် သိချင်သော သတင်းများကို သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဤဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာ၏ ကြီးထွားမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အမြှုပ်များကဲ့သို့ ကြီးထွားလာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သင်ရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ဟာ အလွန်စေ့စပ်သေချာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အမှားကင်းသော အရေးအသားနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အမြင်အာရုံ အကြောင်းအရာ။
ယနေ့ခေတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာများအထိ သတင်းအချက်အလက်များ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာမှုမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်များစွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်သော သတင်းမီဒီယာများရှိသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသော အကြောင်းအရာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရန် ကူညီပေးသည်။
ဤထုတ်ဝေမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိရှိပြီး တိုင်ပင်သင့်သည့် အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာအချို့ကို သင့်အား ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖြစ်အပျက်များအားလုံးနှင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သိရှိနိုင်စေရန်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာသည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သတင်းအချက်အလတ်များကို ရှာဖွေရန် ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှန်တရား၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အရည်အသွေးရှိသော သတင်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့်မီဒီယာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသော၊ စစ်မှန်သောအချက်အလက်များနှင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဖိုးတန်အသိပညာပေးသည့်အရာအားလုံးကို ပေးဆောင်ကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » သတင်းအချက်အလက် » အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာများ